Alahady 12 Febroary 2017 Alatsinainy 13 Febroary 2017 Douglas Karr
Indraindray aho manakorontana ny lohako amin'izay tena alehan'ny Google miaraka amin'ny console search. Na dia mino aho fa serivisy mahatalanjona mamantatra malware amin'ny tranokala ary manakana ireo tranokala ireo tsy ho voatanisa ao amin'ny valin'ny karoka, tsy azoko antoka fa tiako ny Google manadihady tranonkala mitady olana. Ny tranga teny an-toerana dia fanairana mialoha ny fotoana izay tonga tamiko ary, heveriko fa tranokala an'aliny nilaza fa mihazakazaka izy ireo
Alatsinainy, 20 Jona, 2016 Alahady 29 Janoary 2017 Douglas Karr
Toy ny orinasa maro izay maniry sy mivezivezy dia manana mpanjifa miverina mamorona sy mifindra amin'ny sehatra hafa izahay. Ireo namako izay manatsara ny milina fikarohana dia mikoropaka dieny izao. Ny domains dia manangana fahefana arakaraka ny fotoana ary manafoana izany fahefana izany dia afaka mitondra ny fivezivezena ara-nofo. Na dia manolotra fanovana fitaovam-pitaovana aza ny Google Search Console, ny tsy raharahain'izy ireo holazaina aminao dia ny mampanaintaina ity fizotrany ity. Maharary… ratsy. nataoko